सिंगो दलित समुदायमाथी अपमानजनक शब्द बोल्ने कोमल ओलीलाई माफी माग्दैमा छोड्नु हुन्न — Hamro Sanchar
कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन भने कानुनले नै किन बिभेद गर्यो ? जिब्रो चिप्लेकै कारण पुर्व कानुन मन्त्री शेर बहादुर तामाङलाई वर्खास्त गर्ने? मरिसकेपछि डुमै राजा भनेर एउटा सिङ्गो दलित समुदायमाथी अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेकी सांसद कोमल वलीलाई माफी मागेकै कारण हामीले माफी कुनै हालतमा दिनुहुदैन ।
कोमल वली कुनै सर्वसाधारण मान्छे नभएर एक सार्वजनिक पदधारण गरेकी महिला सांसद हुन् । कुनै अनपढ मान्छेले भनेको भएपनी यो विषयमा केहि सोच्न सकिन्थ्यो? कोमल वलीलाई नेपालको संविधान २०७२ र जातीय भेदभाव छुवाछूत कसुर ऐन २०६८अनुसारको कानुनी कारबाही हुनैपर्छ । कानुन बनाउने ठाउमै पुगेकी सांसद कोमल वलीले संविधानको धज्जी उडाउदै सिङ्गो दलित समुदायमाथी अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्नु अति निन्दनीय छ। संविधानमा दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर लेखिएको भएपनि व्यबहारमा सरकारले दोषी उपर कडा कारबाही नगर्दा गल्ती गर्ने जो कोही पनि सजिलै उम्कन सफल भएका छन् भने दिन प्रतिदिन दलित समुदायमाथी जातीय हिंसाका घटनाहरु बढीरहेका छन् ।
सरकार नै दलितको मुद्दामा गम्भीर नदेखिएपछि दलित समुदाय पानी बिनाको माछा जस्तै भएर न्याय नपाएर छ्ट्पटाइ रहनु परेको छ। नेपालको इतिहासमा हरेक राजनीति परिवर्तनका आन्दोलनमा दलित समुदायको उल्लेखनीय भुमिका रहेको छ तर पनि दलित समुदायको मुद्दा भने अझैसम्म पनि राष्ट्रिय मुद्दा हुन सकेको छैन । दलितहरु जातीय छुवाछूतमा मारिदा पनि अन्य समुदाय भने रमिता हेरेर बस्नुले उनिहरुमा मानवीयता नभएको प्रष्ट छ।
जतिसुकै परिवर्तनका कुरा गरेपनी उनीहरुको सोचमा परिवर्तन हुनसकेको छैन। सूखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउछौ भन्नेहरुबाट नै सिङ्गो दलित समुदायमाथी अपमानजनक शब्द प्रयोग गरिन्छ भने अन्यको त कुरै छोडौ बिभेदकारी सांसद कोमल वलिलाइ माफी होइन कानुनी कारबाहीको दायरामा लयाउनुपर्छ ।